Izifundo zeJamani kunye nemibala
Izichazi zesiJamani, njengeziNgesi, zihlala zihamba phambi kwesibizo abaziguqulayo: "der gute Mann" (indoda elungileyo), "das große Haus" (indlu enkulu / isakhiwo esikhulu), "die schöne Dame" (umfazi omhle ).
Ngokungafani nezichazi zesiNgesi, isichazi saseJamani phambi kwesibizo kufuneka sibe nesiphelo (- e kwimimiselo engentla). Okokuphela kwesi siphelo kuya kuxhomekeka kwimibandela emininzi, kubandakanya ubulili ( der, kufa, das ) kunye netyala ( ukutyunjwa , ukunyanzelisa, ukutshatyalaliswa ).
Kodwa ubuninzi bexesha ukuphela ku- e okanye kwi- en (eninzi). Ngama- e-- words, ukuphela kuhluka ngohlobo lwesini esichaziweyo (jonga ngezantsi).
Jonga kule tafile elandelayo malunga nesiphelo sesiphakamiso kwiimeko ezikhethiweyo (umxholo):
Ngomxholo ocacileyo (der, die, das) - Icandelo lokutyunjwa
imoto entsha schön Stadt
kwisixeko esihle Das alt Auto
imoto endala kufa neu Bücher
Ngomxholo ongapheliyo (eine, kein, mein) - Igama. kwimeko
imoto entsha eine schön Stadt
isixeko esihle kwi-Auto Auto
imoto endala keine neu Bücher
Qaphela ukuba nge- e-- words, ekubeni eli nqaku lingasitshelanga ngesini lesi sibizo esilandelayo, isichazi esiphelisa ngokuqhelekileyo senza oku kunoko (- es = das , - er = der ; bona ngasentla).
NjengesiNgesi, isichazi sesiJamani sinokuza emva kwesenzi (isichazi-magama): "Das Haus is groß." (Indlu inkulu.) Kwiimeko ezinjalo, isichazi asiyi kuba nokuphela.
Amagama aseJamani emibala ngokuqhelekileyo asebenza njengezichazi kwaye athabatha iziphelo eziqhelekileyo zezipelisi (kodwa ubone izinto ezingezantsi). Kweemeko ezithile, imibala ingaba nezibizo kwaye zithathwa njengegama: "Eine Bluse eBlau" (i-blouse eluhlaza okwesibhakabhaka); "Das Blaue vom Himmel versprechen" (ukuthembisa izulu nomhlaba, ukukhanya, "i-blue blue").
Itafile engezantsi ibonisa ezinye zeempawu eziqhelekileyo kunye nemigca yesampuli. Uza kufunda ukuba imibala "ekuzivekeni okwesibhakabhaka" okanye "ukubona obomvu" ayinakuthetha into efanayo kwiJamani. Iliso elimnyama kwiJamani "li-blau" (eluhlaza).
Farbe Umbala Iimpawu zeMbala ngeSiphetho seNkqubo
ukubola bomvu der rote Wagen (imoto ebomvu), der Wagen isobola
rosa i pinki kufa Rossa (i roses pinki) *
i-blau luhlaza I-blame i-Auge (iliso elimnyama), i-er ist blau (inxila)
luhlaza afe hellblaue Bluse (i-blouse eluhlaza okwesibhakabhaka) **
luhlaza kufa i-dunkelblaue i-Bluse (i-dark blue blouse)
grün luhlaza der grüne Hut (isitya esisihlaza)
gelb lubhelu kufa i-gelben Seiten (iphepha eliphuzi), i-gelbes Auto
weiß mhlophe das weiße Papier (iphepha elimhlophe)
schwarz mnyama schwarze iKoeffer (i-suitcase emnyama)
* Imibala ephela -a (ila, i-rosa) ayithathi iziphelo eziqhelekileyo.
** Imibala ebomvu okanye emnyama ilandelwa isihogo- (ukukhanya) okanye i-dunkel- (emnyama), njenge-hellgrün (eluhlaza obumnyama) okanye i-dunkelgrün (eluhlaza obumnyama).
Isiqulatho kunye namazwi okusebenza
Iziseko zeeJamani ezikhoyo zesiTenzi
Indlela yokudibanisa "Qala" (ukuqala) ngesiJamani
Yithi Imini Yokuzalwa Enomdla NgeBhayibhile YeBhayibhile
Iidrama ezinkulu malunga noMdaniso
10 Iingcamango Ngeentlebhu
Indlela yokwenza uhla lweDDGGrid
Yintoni eyahlukileyo phakathi kweendawo ezihambelanayo kunye nendawo engafanelekanga?
I-Gloyiary Glossary Inkcazo ye-Ion